मकरको अर्थ के ? कसरी सुरु हुनपुग्यो ? – Samacharpati Samacharpatiमकरको अर्थ के ? कसरी सुरु हुनपुग्यो ? – Samacharpati
मकरको अर्थ के ? कसरी सुरु हुनपुग्यो ?
इन्द्राणीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर माघ महिनाको पुण्य घडीमा रुद्रावती नदीको रूप लिई पार्वती त्यहाँ गुप्तरूपले बग्न थालिन् । दिव्यचक्षुले इन्द्राणीले रुद्रावती नदी बगेको देखिन् । पनौतीका बासिन्दाहरू प्रयागमा गङ्गा र यमुनाको सङ्गममा गुप्त रूपले सरस्वती मिसिन आएझैं यहाँ पनि पुण्यमाता र रोशीको सङ्गममा गुप्त रूपले रुद्रावती मिसिन आएकी छिन् भन्ने विश्वास गर्छन् । त्यसैले पनौतीघाटलाई उत्तरप्रयाग नामले पनि चिनिन्छ ।
सहाराविहीन लिम्बुनीलाई जीवनभरका लागि चामल सहयाेग (फलोअप)